Aimbove Pimp Anokwevera Kumashure Chifukidzo paPsychological Warfare Vatengesi Muhoro Kurwisa Vana |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Aimbove Pimp Anodhonza Kumashure Chifukidziro paPsychological Warfare Vatengesi Vanotambisa Vana
Aimbove Pimp Anodhonza Kumashure Chifukidziro paPsychological Warfare Vatengesi Vanotambisa Vana
Pazera ramakore gumi nematanhatu, Derek Williams akataura nemusikana wake ane makore 16 okukura kuti amutendere kuti amutengese kuti atsigire kupindwa muropa kweheroin yemabhegi matatu pazuva. Mhindu inobhadhara yakamupinza mumakore 14 ari mutengesi, achitengesa vakadzi nepwere vanopfuura 32 mumatunhu 150 ose, Canada, uye Europe.
Derek haana kukura achirota zvekuzoita mwana mutengesi wepabonde. Aida kuva gweta. Zvisinei, kubatwa zvisina kufanira, kuregeredzwa, uye kumwe kukuvadzwa zvakashandura zviroto zvake kuva nhamo yokusava netariro. Mamiriyoni evana veAmerica akavharirwa mukusava netariro kumwe cheteko nhasi, zvichiita kuti vave panjodzi yekuva vanyajambwa vevanhu vakaita saDerek kana kuva zvaari.
Mitambo Yepfungwa: Kunzwisisa Trafficker Psychological Warfare inopindirana nyaya yaDerek netsvakiridzo yakavakirwa pauchapupu, maturusi anoshanda, uye maonero emunhu kubva kune mumwe munyori uye mutauriri wepasirese akahwina mibairo Dr. Deena Graves. Anowedzera ruzivo rwakakosha kubva kumakore gumi nematatu eruzivo rwakanangana nevakabatwa uye kudzidzisa vamwe kudzivirira nekuporesa vakabatwa.
Kwenguva yakareba kwazvo, kushungurudzika uye vatengesi vane nzira yavo nevana vedu: Tsvakurudzo-yakavakirwa pauchapupu yakawana zvakanyanya kuti hatisi kuvadzivirira kubva kune vatengesi uye kuti avo vanova vanyajambwa vanowana kurapwa kwakaringana kwekushungurudzika kwavo kwakasiyana, kwakaoma. Somugumisiro, kutsvakurudza kunoratidza kuti vakawanda se50 muzana vanoedza kutiza nokuzviuraya; vane 40 muzana yepamusoro-soro yekufa kupfuura avhareji yenyika.
Iyi groundbreaking biography inoshuvira kushandura izvozvo. Yakareba kupfuura nakare kose, nekukwezva kwepamhepo kwevana nepwere kuri kuwedzera 97.5 muzana kubva 2019 kusvika 2020. Denda rekuora mwoyo, kufunganya, kutya, uye kusurukirwa kunowedzerwa nedenda kunoita kuti vana vedu vanyanye kubatwa zvakanyanya kupfuura nakare kose kune vatengesi.
Mind Games inotora simba kubva mumaoko avo uye inoisa mune yako. Iyo imwe-ye-ye-yemhando mukana kune nyanzvi, vekutanga vanopindura, uye vabereki / vabereki vanorera kuti vanzwisise iyi indasitiri inoparadza kubva mukati kunze. Chitsauko chega chega chinoita hukama hwakakosha pakati pezviitiko muhupenyu hwaDerek uye chii chingave chakatungamira kune mhedzisiro dzakasiyana.
Derek haaiti tuzvikonzero pane zvaakaita. Anoburitsa nyaya yake pachena kuti abatsire vanhu kunzwisisa kuti vatengesi vanobata sei kukuvara kwehuduku uye humwe hudziviriro hwekukwezva vanobatwa mumusungo wavo.
“Nekuburitsa nyaya yangu, ndinovimba kukupa mazano ekurwisa kusava netariro kwanobata vana, zvichiita kuti vabatwe nemhuka ine hunyanzvi kana incubator yechikara mukugadzira sezvandakaita. Kunyange zvazvo ndisingakwanisi kutsiva upenyu hwose hwandakaparadza, ndinoshuva kudzivirira kuparadzwa kwevamwe vana vedu.”
Denise Williams, akabatwa kwenguva refu naDerek uye pasi, akanyora nhanganyaya uye anowanikwa nevanyori vaviri ava kubvunzurudzwa. Denise akave nyajambwa pazera re11 uye anowedzera kudzika kweruzivo rwekuti kushungurudzika kwehucheche kunova nzvimbo yekuvhima yemutengesi. Akagadzira chirongwa chinozivikanwa munyika yose Hwangu Hupenyu Hwangu Sarudzo uye anoburitsa nzira iyo vanobatwa nekutengesa vanoenda kuzasi, vanotsvaga, kana mutengesi.
Gore rimwe nerimwe muUnited States, vana vanotambura zviitiko zvinorwadza zvinopfuura mamiriyoni 246 zvinozivikanwa, kubatanidza kutengeswa, kubatwa zvisina kufanira muvatano, kutiza kubatwa zvisina kufanira mudzimba dzavo, uye nzara. Iri bhuku rinotevera rinoshandura pfungwa dzisina kujeka, buzzwords, uye tsvagiridzo kuita chido chinosimudzira chiito.
Nzira Itsva Yekuyera Mafambiro Ekufamba muVana Vane Autism
Hove Processing Market Research Report 2022 - Global...
Fatty Chiropa Chirwere Makareki, Chiropa Biopsy, uye ...